Nezvedu - Shandong Yunlong Eco Technologies Co., Ltd.
Dzimbahwe redu rinofukidza nzvimbo inopfuura 700,000㎡, ine 6 yakamisikidzwa maworkshops anosanganisira R&D centre ine zvechizvino uyeHungwaru hwekugadzira zvivakwa zvehukuru hwekugadzira maitiro senge kudhinda, welding, kupenda, kusangana, kuve nechokwadi chekugadzirwa kwemhando uye kugona kwegore rekugadzira kwe200,000 seti pagore.Tiine timu ine ruzivo uye nyanzvi, makumi maviri einjiniya eR&D, gumi neshanu mainjiniya eQ&A, makumi matatu emainjiniya ebasa nevashandi mazana maviri, mota dzedu dzemagetsi dzinogona kuve dzakakodzera uye kutengeswa kupasi rese.Parizvino, isu tinotarisisa mota dzemagetsi dzinotakura vanhu dzekutyaira chinhambwe chipfupi, kufamba kwemazuva ese kudzikisa kabhoni, uye mota dzemagetsi dzekutakura zvinhu zvemagetsi ekupedzisira maira mhinduro yekushandiswa kwekutengesa, kuendesa kana zvinhu, kuchengetedza mutengo wevashandi uye kushandiswa kwemafuta.
Yunlong E-mota dzakabudirira kupinda mumisika yepasirese nemhando yepamusoro uye mashandiro, pamwe nesevhisi yakakwana mushure mekutengesa, takunda kurumbidzwa kukuru kubva kune vatengi, vanobva kunyika dzinopfuura makumi matatu pasirese, seGermany, Denmark, Sweden, Finland, France, Poland, Czech, Netherlands, Italy, Russia, Ukraine, Japan neSouth Korea etc. Tinovimba nemoyo wese kuti tinogona kushanda pamwe newe kwenguva yakareba-kuhwina bhizinesi.
Mukuongorora kweNew Technologies, New Industries, yakasarudzika geneti yekusimudzira yakaumbwa zvishoma nezvishoma, ichimhanyisa shanduko kubva kubhizinesi rekugadzira kuenda kune yekugadzira sevhisi uye tekinoroji innovation bhizinesi, zvichitungamira shanduko uye kusimudzira kwesimba idzva remagetsi indasitiri yemotokari nehunyanzvi hwekuita.
Yunlong's corporate tsika ine chekuita zvakanyanya pane ramangwana uye kusimudzira kwekambani.Chiono chedu ndechekusimbisa hupenyu hwako eco, kuita eco nyika.Basa redu nderekuramba uchivandudza, kutevera uye kuzadzisa zvaunoda.Hunhu hwedu hwakakosha Kutendeseka, Kuvandudza, Kudyidzana.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezvedu, pls inzwa wakasununguka kupa pfuti chero nguva.
Chiono: Gadzirisa hupenyu hwako eco, ita eco nyika.
Mission: Ramba uchivandudza, tevera uye uzadzise zvaunoda.
Zvinokosha:Kutendeseka, Kuvandudza, Kushandirapamwe.
Isu tiri pane rondedzero kubva kuMIIT yeChina, ine hunhu hwekugadzira nekugadzira mota dzemagetsi uye tinogona kuwana kunyoresa & rezinesi ndiro.
20 R&D Engineers, 15 Q&A Egnineers, 30 Service Engineers uye mazana maviri emplyees
Professional Kutengesa uye Mushure mekutengesa Sevhisi.
Isu tinopa vatengi vedu vakakosha nehunyanzvi pre-kutengesa uye mushure-yekutengesa sevhisi.